Tamarta lagu soo saaro hal tan oo aluminium ah si loo sameeyo waa 5% kaliya qalabka kale, iyadoo la badbaadinayo ku dhawaad ​​10 tan oo qiiqa CO2-faaiido dheeri ah oo kor u qaadeysa qiimeynta LEEDS ee mashruuc.
Dusha sare ee baarkinka alloy aluminiumka waxaa lagu daaweeyaa daaweyn liddi ku ah oksaydhka, taas oo ka dhigi karta badeecada daawaha aluminiumka inay yeelato hawl iska caabin daxaladeed oo sarreeya.
Si kasta oo ay tahay jawi noocee ah, ilaalada dhoobada aluminiumku ma daxalayso, ma dhalaali doonto, budo ma dhici doonto, midabkuna wuxuu ahaan doonaa mid dhalaalaya oo waara. Isla mar ahaantaana, ikhtiyaarrada midabka hodanka ah si loo buuxiyo shuruudaha macaamilka.
Boostada 50*50mm Tube Fagaare Ama Toos Ku Saabsan Codsiyada Macmiilka Dhamaadka Dhulka Daawada budada ah
Guddi Muraayad Qosol, Dahaar, Dahsoon Midabka Muraayadda Cad, Barafaysan ama Midab leh
Dhererka Kartoo Nooca Buurta Dusha, Dhinac ama Buurta Muhiimka ah
Daboolka Sare 90*32mm Handrail Square Caawinta Tareenka 1½ "Tareenka SS; 2" Tareenka Qoryaha
Xulashada Midabka Madow, Caddaan ama La -habeeyay oo Ku saleysan Koodhka Midabka Macmiilka
Dhumucda Muraayada 1/2 "(daq.) Guddiyada Muraayadaha
Tallaabada 1: U dir cabirkaaga ama sawirka mashruuca
Marxaladaha hore ee hawsha, waxaad noo soo diri kartaa cabbirka ama sawirka mashruucaaga. Haddii aadan lahayn cabbir, waxaan ku bari doonaa sida loo cabbiro. Inta lagu jiro kalfadhigan, kooxda naqshadeeyeyaashu waxay kula xiriiri doonaan adiga ama injineerkaaga dhibaatooyinka xallinta.
Tallaabada 2: Naqshad
La xiriir Kooxdayada Naqshadeynta si aad u hesho xigasho shaqsiyeed oo aad bilowdo habka injineernimada taraafikadaada cusub.
Iyada oo leh qiyaaso qiyaas ah oo kaliya, waxaan kugu siin karnaa inaad ku qiimeyso biraha loo baahan yahay gurigaaga iyo booskaaga! Ha ka welwelin saxsanaanta tallaabadan hadda, marka xigashada la dhammaystiro, kooxdayadu waxay ururisaa macluumaadka intiisa kale ee loo baahan yahay.
Tallaabada 3: Xigasho
Qiimaha nidaamka taraafiga muraayadda aluminiumkaaga waxaa lagu go'aamin doonaa cabbirka guud ee taayirrada aad u baahan tahay, iyo sidoo kale xulashooyinka dhammaystirka ee aad doorato.
Waxaan abuurnay qiyaasaha qiimeynta onlaynka ah ee aad u adeegsan karto si aad u hesho fikrad guud oo ku saabsan inta nidaamku ku kici doono dalabkaaga, waxaadna arki kartaa sida xulashooyinka dhammaystirka ee kala duwan u saameeyaan qiimahaaga.
Tallaabada 4: Been -abuurka Tareenka
Ka dib marka la oggolaado sawirrada dukaanka, nidaamkaaga muraayadda dhalada aluminiumku wuxuu u soo baxaa wax -soo -saarka warshaddeenna Foshan, Shiinaha. Waxaan leenahay alwaax, biro, iyo tas -hiilaad samaynta dhalooyinka si aan u awoodno inaan soo saarno qayb kasta oo jaranjaradaada ah.
Ujeeddada geedi -socodkeenna been -abuurka ayaa ah in habka rakibidda loo sameeyo sida ugu fudud ee suurtogalka ah. Tareenka waxaa loo gooyaa dhererka saxda ah ee aad u baahan tahay. Waxaan awoodnaa inaan si sax ah u saxno sababta oo ah waxaan xakameynaa hannaanka injineernimada ee nidaamka oo dhan, waxayna ka dhigaysaa habka rakibidda shaqo isku -dhafan oo fudud.
Tallaabada 5: Rakibaadda
Marka nidaamkaaga tareenka la been abuuro, waxaan ku rari doonaa sawir tilmaanta rakibidda oo waxaan ku bixin doonaa tilmaamaha rakibidda onlayn. Badeecadahayagu waa fududahay rakibidda DIY iyo inta badan alxanka uma baahna. Mashaariicda intooda badan waxaa lagu dhamayn karaa maalmo yar gudahood.
Haddii loo baahdo, ACE waxay kaloo bixisaa rakibidda albaabka.
Hore: Terrace Aluminum Frameless U Channel Base Glass Railing
Xiga: Taayirada Birta ee Dhaqanka ee Caadiga ah ee Balkoonka ama Jaranjarada
Profiles -yada Aluminiumka
Qaybta Tareenka Aluminium
Tareenka Aluminium Jaranjarada
Powder dahaarka Aluminum Aluminum
Jaranjarada Aluminum Alwaax